Apple Kutarisa mitambo yakanyanya? Bloomberg inoti hongu | Ndinobva mac
Apple Kutarisa mitambo yakanyanya? Bloomberg anoti hongu
Sekureva kweshumo nyowani yaBloomberg yaMark Gurman, Apple inogona kunge iri kufunga nezvekutanga Apple Watch ine kesi yakagadzirirwa kuchengetedza wachi kubva kumitambo yakanyanyisa. Iyi wachi nyowani (kunyangwe kana iri yekunze chete) ichave ichiwanikwa, sekutaura kweye muongorori, gore rimwe chete 2021. Saka kana iwe uri mumwe wevaya vanoda kutora iyo Apple Watch padhuze nepese, unogona kunge uchifarira uyu modhi.
Muongorori weApple Bloomberg akazivisa mune gwaro nyowani kuti Apple inogona kufunga nezvekutanga Apple Watch gore rino, asi yakagadzirirwa vashandisi vanoda mitambo yekunze uye kunyanya mitambo yakanyanyisa. Nekuti zviri pachena kuti wachi yekambani inoshandiswa zvemitambo, asi vashandisi vazhinji havashingi kuishandisa nekuti haina kusimba. Muchokwadi, iwo musika uzere nezviitiko zvakakosha zvewachi nemitambo.
Haisi nguva yekutanga iyo Apple inofunga smartwatch ine hunhu. Iyo kambani yakafunga nezve kuburitsa modhi yekukumbira kune vakanyanyisa mitambo vatambi padivi peiyo yekutanga Apple Watch, iyo yakaburitswa muna 2015. Kana Apple ikaenderera mberi panguva ino kutenderera, iyo rugged vhezheni ingave iri yekuwedzera modhi yakafanana neiyo Apple inopa sarudzo yezasi. mutengo senge SE uye akasarudzika edhisheni akabatanidzwa neNike naHermes. Dzimwe nguva zvinonzi "Ongororo Yekutsvagisa" mukati meApple, chigadzirwa chinenge chiine mashandiro akafanana neyakajairwa Apple Watch, asi nekuwedzera kusagadzikana nekudzivirira muCasio mutsara weG-Shock watches.
Muongorori anotsunga kufanotaura, semuenzaniso, kuti chishandiso chitsva chingaitwe "chakasimba" kuchipa kabhavhu. Nenzira iyi zvinogona kuramba zvichidzivirira kukuvara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Apple Kutarisa mitambo yakanyanya? Bloomberg anoti hongu